Jardiinooyinka qaranka Tansaaniya ayaa magacaabay meelaha ugu sarreeya ee ay tagaan dadka xiiseeya bannaanka
Location: Bogga ugu weyn » Soo dirida » Dalka | Gobolka » Tansaaniya » Jardiinooyinka qaranka Tansaaniya ayaa magacaabay meelaha ugu sarreeya ee ay tagaan dadka xiiseeya bannaanka
Saddexda seerdood ee ugu sarreeya ee dhammaan ku yaal wareegga dalxiiska ugu qanisan Afrika ayaa si weyn loogu soo bandhigay 25-ka jardiinooyin qaran ee ugu wanaagsan adduunka oo dhan, taas oo ay ugu wacan tahay aragtida socdaalka iyada oo loo marayo madal La-taliyaha Safarka.
Tansaaniya SerengetiXadiiqadaha qaranka ee Kilimanjaro iyo Tarangire ayaa loo doortay goobaha ugu wanaagsan ee loogu talagalay dadka xiiseeya bannaanka, taasoo sare u qaadaysa sumcadda dalka oo ah meesha ugu sarreysa ee loo dalxiis tago.
"Serengeti ayaa noqonaysa meesha ugu sareysa ee dadka xiiseeya bannaanka ee Afrika iyo kan saddexaad ee Adduunka 2022,” ayuu qoray La-taliyaha Safarka.
Socdaalayaashu waxay sidoo kale doorteen jardiinooyinka qaranka ee Tarangire iyo Kilimanjaro ee dalka meelaha ugu wanaagsan ee loo aado adduunka.
Abaalmarinta Xulashada Safarrada waxaa sannad walba la bixiyaa iyada oo loo marayo barnaamijka La-taliyaha Safarka.
Guddoomiyaha cusub ee ilaalinta ee loo magacaabay maamulka ilaalinta ee dawladu maamusho - Tansaaniya Seeraha Qaranka (TANPA), Mr William Mwakilema, ayaa helay warkan isagoo mahad-naqsan, isagoo sheegay inay codka kalsoonida u tahay halka ay Tansaaniya ku socoto macaamiisha caalamka.
"Waxaan ka shaqeynaynay waqti dheeri ah si aan u ilaalino seerayaashan qaranka, aad ayaan ugu faraxsanahay in dunidu ay ugu dambeyntii aqoonsatay dadaalladayada naxariista leh," Mr Mwakilema ayaa sharaxay.
Sidoo kale waxaa warku aad uga xumaaday Kaaliyaha Wakiilka Ilaalinta ee TANAPA ee masuulka ka ah Portfolio Business, Ms Beatrice Kessy, oo sheegtay in macaamiisha caalamku ay dhexdhexaad ka ahaayeen aqoonsiga quruxda dabiiciga ah ee Tansaaniya.
Soo booqda dibadda ee Serengeti waa in loo diyaar garoobaa in aad la yaabto baaxadda seeraha qaranka ee baaxadda dhulku ku socoto weligeed. Inta ay ku jiraan beerta, waxay markhaati ka noqon karaan socdaalka caanka ah ee Serengeti ee sannadlaha ah, socdaalka dhulka ugu weyn uguna dheer ee dhulka.
Baaxadda ballaaran ee Serengeti waxay ka kooban tahay 1.5 milyan hektar oo savannah ah, dekedda ugu badan ee hadhaagii aan la beddelin ee laba milyan oo duurjoogta ah iyo boqollaal kun oo cawl iyo zebras oo ku hawlan socdaal wareeg ah oo dhererkiisu yahay 1,000 kiiloo mitir oo dhererkiisu yahay labada waddan ee isku xiga. Tansaaniya iyo Kenya, sida ay uga daba-tagaan ugaartoodii.
Waxay ku taal meel ka sarraysa 8,850 cagood, Beerta Qaranka ee Kilimanjaro, iyadu, waxay ilaalisaa meesha ugu sarreysa Afrika iyo buurta adduunka ugu dheer ee xorta ah, oo kor u kacda ku dhawaad ​​20,000 cagood.
Marka la fuulo, cagaha buurtu waxay isu rogaan kaymo qurux badan, iyagoo u adeegaya sidii guri ay ku nool yihiin maroodi, shabeel iyo gisi.
Intaa waxa dheer dhul mooryaan ah oo ay ku daboolan yihiin Heather weyn, ka dibna dhul saxare ah oo alpine ah. Waxaa weli ka sii sarreeya barafka iyo barafka ka dhigaya Kilimanjaro caan. Kor u kaca xagga sare, waa Uhuru Peak, waxay qaadataa lix ilaa todoba maalmood.
Ms Kessy ayaa sheegtay in shirka Mount Kilimanjaro, oo ah goob loo dalxiis tago oo ku taal ku dhawaad ​​5,895 mitir oo ka sarraysa heerka badda, uu qiyaas ahaan soo jiito 50,000 oo qof oo fuula adduunka oo dhan sannadkii.
Waxaa loogu magacdaray wabiga ka dhex mara muuqaalkiisa quruxda badan, Beerta Qaranka ee Tarangire waxay siisaa booqdayaasha khibrad gaar ah oo Tansaaniya ah.
Beerta ayaa hoy u ah maroodiga ugu badan ee dalka. Waxaad arki kartaa xoolo gaaraya ilaa 300 oo qodaya sariirta wabiga Taangire xilliyada qalalan. Waxa kale oo ay leedahay duurjoogta kale ee waddaniga ah ee u dhexeeya impalas ilaa wiyisha iyo hartebeest gisi.
In kasta oo safarigu yahay soo jiidashada caanka ah ee aagga, la kulma dhirta waddaniga ah sida baobabka ama geedaha nolosha sida ay caan u yihiin iyo shabakada isku dhafka ah ee beerta dhirtu waxay ka farxisaa kuwa jecel dabeecadda.
Iyadoo ku dhawaad ​​1.5 milyan oo dalxiisayaal ah ay dalka booqdaan sanadkiiba, dalxiiska duurjoogta Tansaaniya ayaa sii wada kobaca, isagoo kasbanaya khasnadda qaranka $2.5 bilyan, oo u dhiganta ilaa 17.6 boqolkiiba GDP-ga, taasoo caddaynaysa booska warshadaha ee ah hormuudka lacagaha qalaad.
Intaa waxa dheer, dalxiisku waxa uu si toos ah Tansaaniyaanka u siinayaa 600,000 oo shaqo, iska daa in ka badan hal milyan oo kale oo iyaguna dakhligoodu ka helo silsiladda qiimaha ee warshadaha.
In kasta oo warshadaha si xun loo garaacay ka dib markii uu dillaacay masiibada COVID-19 bishii Maarso 2020, qorshayaasha soo kabashada ee heer qaran iyo heer gobol ayaa sida muuqata bilaabay bixinta saami qaybsiga.
Africa Business Covid-19 COVID-19 masiibada Mount Kilimanjaro Serengeti Tansaaniya Beerta Qaranka ee Tarangire
Dalxiiska Jamaica wuxuu xoojiyaa xiriirka dalxiiska ee cusub ee Jamhuuriyadda Dominican
La dagaallama gubashada adiga oo wakhti ku qaadanaya qorshaynta fasaxaaga